चीन हामीले COVID 19 आपूर्तिकर्ताको बिरूद्ध के गर्नु पर्छ गुंगेली
COVID १ against बिरूद्ध हामीले के गर्नुपर्दछ
हामी सबैलाई थाहा छ कि विश्वभरिका मानिसहरूले COVID १ against बिरूद्ध खोप लिनेछन। के यसको मतलब हामी भविष्यमा पर्याप्त सुरक्षित छौं? वास्तवमा, कसैले पक्का गर्न सक्दैन कि जब हामी काम गर्न सक्दछौं र स्वतन्त्र रूपमा बाहिर जान सक्छौं। हामी अझै पनी देख्न सक्छौं कि हामी अगाडि कठिन समयहरू छन् र आफैले घर भित्र र बाहिरबाट आफूलाई बचाउन ध्यान दिनु पर्छ।
अब हामीले के गर्नुपर्छ?
१. सकेसम्म सकेसम्म COVID-19 खोप लिनुहोस्। तपाईंको COVID-19 खोप नियुक्ति अनुसूची गर्न, खोप प्रदायकहरू अनलाइन समय तालिका सेवाहरूको भ्रमण गर्नुहोस्। यदि तपाइँसँग तपाइँको खोप नियुक्ति अनुसूची को बारे मा प्रश्न छ भने एक खोप प्रदायक सिधा सम्पर्क गर्नुहोस्।
२. अनुहारको मास्क लगाउनुहोला जब तपाईं बाहिर आउनुहुन्छ पनि तपाईंको खोप लगाउनुहुन्छ। कोविड - १ छोटो समयमा अदृश्य हुने छैन, तपाई र तपाईको परिवारलाई राम्रोसँग बचाउनको लागि, अनुहारको मास्क लगाएर जब बाहिर वास्तवमै आवश्यक हुन्छ।
Air. घर भित्र वायु शोधक प्रयोग गर्नुहोस्। एक श्वासप्रश्वास अवस्थाको रूपमा, COVID-१ dr पनि थोपाबाट फैलन्छ। जब मानिसहरू छींकन्छ वा खान्छन्, तिनीहरू पानी, बलगम र भाइरल कणहरू भएको हावामा तरलको थोपाहरू बाहिर निकाल्दछन्। अन्य व्यक्तिहरू तब यी बूँदाहरूमा सास फेर्छन् र भाइरसले तिनीहरूलाई संक्रमित गर्दछ। कम भेन्टिलेसनको साथ खचाखच भरिएको भित्री इनडोर रिक्त स्थानमा जोखिम सबैभन्दा बढी छ। तल एक लोकप्रिय एयर शुद्धकर्ताको साथ HEPA फिल्टर, anion र UV बाँझीकरण छ।
१) हेपा फिल्टरेशनले भाइरसको आकार (र यति धेरै साना) को कुशलतापूर्वक क्याप्चर गर्दछ जसले COVID-19 लाई निम्त्याउँदछ। ०.०१ माइक्रोन (१० नानोमिटर) र माथिको, HEPA फिल्टरको क्षमताको साथ, ०.०१ माइक्रोन (१० नानोमीटर) र माथिको दायरा भित्रका कणहरू फिल्टर गर्नुहोस्। भाइरस जसले COVID-१ causes पैदा गर्दछ लगभग ०.२2525 माइक्रोन (१२ 125 नानोमिटर) व्यासमा छ, जो कण-आकार दायरा भित्र वर्ग रूपमा खस्छ जुन HEPA ले असाधारण दक्षताका साथ क्याप्चर गर्दछ।
२) एक एयर प्युरिफायरमा आयनीकरण फिल्टरको प्रयोगले वायुजनित प्रसारित इन्फ्लूएन्जाको प्रभावकारी रोकथाममा मद्दत गर्दछ। आयनइजरले नकारात्मक आयनहरू उत्पन्न गर्दछ, वायुजनित कणहरू / एयरोसोल ड्रपलेटहरू नकारात्मक रूपमा चार्ज गर्दछ र इलेक्ट्रोस्ट्र्याटिकली सकारात्मक चार्ज कलेक्टर प्लेटमा आकर्षित गर्दछ। उपकरणले हावाबाट भाइरसको छिटो र सरल हटाउन अनुपम सम्भावनाहरू सक्षम गर्दछ र एकसाथ पहिचान गर्न र भाइरसहरूको एयरबर्ने ट्रान्समिशन रोक्न संभावनाहरू प्रदान गर्दछ।
)) बिभिन्न अनुसन्धानहरूका अनुसार ब्रॉड-स्पेक्ट्रम यूवीसी लाइटले भाइरस र ब्याक्टेरियालाई मार्छ, र यो हाल शल्य उपकरणहरू रोक्न प्रयोग गर्दछ। चलिरहेको अनुसन्धानले यो पनि देखाउँदछ कि यूभी किरणोत्थानसँग एचआरएनएन र ब्याक्टेरिया र भाइरसको अन्य सामान्य प्रकारहरूमा SARS -COV भाइरस दुबैलाई अवशोषित र निष्क्रिय पार्ने क्षमता छ।
एयर प्यूरिफायरको बारेमा कुनै पनि चासो, थप विवरण र छुटहरूको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्न स्वागत छ।
स्वाभाविक Neutralizes घर एयर शोधक , ओजोन एयर प्युरीफायर होम डिपो , घर हिप लागि एयर शोधक, घर एयर शोधक, सर्वश्रेष्ठ होम एयर शोधक Uk , यूवी घर एयर शोधक , सबै उत्पादन